Ebe kachasị dị ọnụ ala n'ụwa bụ Asia | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | Bali, Bangkok, Hanoi, Indonesia, Malaysia, Tailandia, Asia njem, Vietnam
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga njem ebe adịghị ọnụ ala yana ị na-amasịkwa ha maka ihe ọ bụla ha nwere inye, ị gaghị echefu ọkwa a n’ihi na m ga-agwa gị gbasara ụfọdụ ebe ndị njem pụrụ ịmasị gị. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ dị mkpa ịmata ebe ị ga-enwe ezumike dị mma mana na akpa gị adịghị ewe iwe.
Ikwu banyere gị blọgụ Tim Leffel , onye edemede nke akwụkwọ ụwa kachasị ọnụ ala: Mba 21 Ebe Ego Gị Bara Uru, mbipụta ya Njem na Ntụrụndụ site na nhọrọ nke ebe kachasị ọnụ ala n'ụwa, n'etiti nke o doro anya na ọtụtụ ndị Asia.
1 Obodo Asia
3 Ndịda ọwụwa anyanwụ Asia maka ndị na-azụ azụ
4 Ihe kachasị ọnụ bụ ụgbọ elu
5 Mgbe ị nọ ebe njedebe gị
Ọ dị ihe dị ka narị kilomita asaa n’ebe ugwu Bangkok ọ bụkwa otu n’ime obodo ndị a kacha eleta na Thailand. Ọ bụ obodo a makwaara dị ka "La Rosa del Norte" na ọ bụ ezigbo obodo mara mma n'ihi ọdịdị dị na ya.
Anyị na-ekwu maka isi obodo Nepal na ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ ebe ọtụtụ ndị njem na-achọ. Obodo a ọ dị ka obodo Eshia ọ bụla jupụtara n'ọgba agharaMana ọ bụ obere obere obodo, naanị mmadụ nde na ọkara bi na ya. Ọ dị elu nke 1317 mita karịa elu oke osimiri ma ọ bụrụ na ị ga-eleta ya otu oge, ị ga-achọ ịlaghachi. Okporo ámá ya, ụlọ arụsị ya, ndị mmadụ, ámá ya na ihe ọ bụla ọ na-enye ga-eme ka ị lọghachi. Omume ọma ndị Napalese ga-eme ka ahụ dịrị gị mma.
Hanoi bụ obodo ị ga-ahụ n'anya n'akụkụ nke ọ bụla, ọ dịkwa ọnụ ala, yabụ ọ ga-abụ akụnụba ịnụ ụtọ ụbọchị ole na ole (ma ọ dịkarịa ala ma e jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ na-aga njem). Hanoi bụ isi obodo Vietnam ọ dịkwa n’ebe ugwu obodo ahụ. Ọ bụ obodo nwere ihe karịrị otu puku afọ nke akụkọ ntolite ma nwee ọtụtụ ebe nkiri iji chọpụta na ị gaghị enwe ụbọchị iji hụ ya niile.
Ọ bụrụ na ị gaa Bangkok ị ga-ahụ n'anya ịnụ ụtọ ịme guiri n'akụkụ ọ bụla. Bangkok dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Na Thailand a maara obodo a dịka Krung Thep iji zoo aka na oke ya. E nwere nde mmadụ 8 bi na ya na enwere ndị hụrụ ụdị ọgba aghara nke obodo a na ndị ọzọ na-achụghachi ha.
Okporo ámá ya, ogige ntụrụndụ ya, gastronomy ya, ịhịa aka ya, ndị otu ya ma ọ bụ ebe ịzụ ahịa ya ga-eme ka ịchọọ ịnọ ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi.. Anything gaghị atụ uche ihe ọ bụla na ọ bụghị ndị dị otú ahụ ihe dị oké ọnụ obodo.
Ma oburu na ihe ichoro bu agwaetiti ma ichoro ima ebe odighi nma ma nwe obi uto na obi iru ala nke agwaetiti nwere oke wetara gi, i ghaghi ileghara ebe ndi a:
Borneo, Malaysia na Indonesia
Ndịda ọwụwa anyanwụ Asia maka ndị na-azụ azụ
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ n'ezie paradaịs ndị na-ebugharị ebugharị. Mba ndị na-emepebeghị emepe dị oke ọnụ dịka nnweta na mkpa dị ụkọ, na-ebuli ọnụ ahịa. Nke a bụ ihe na - eme n'ọtụtụ ebe na South America na ọkachasị Africa. Ọ bụ nke a kpatara na ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnọ wee nwee ahụ iru ala ị ga-akwadebe akpa gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego ... mgbe ahụ ihe kachasị mma bụ na ị na-eche maka otu esi aga njem dịka akpaazụ azụ.
N'aka nke ọzọ, imirikiti mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-emepe emepe nke e nwere ọtụtụ njem nleta na nke na-achọkwa, nke ya na ego na ọnụ ahịa nke ndụ dị iche iche, na-eme ka ọnụ ahịa daa. Ihe si na ya pụta bụ na na Thailand, Malaysia, Vietnam ma ọ bụ Indonesia, anyị nwere ike ịga njem maka ihe ọchị (ọ bụrụhaala na anyị etinye nkasi obi n'akụkụ) ma ọ bụ mefuo ego na-adịghị mma (ị maara, echiche nke okomoko Eshia). Maka nke a, ọ ga-adabere na gị na echiche gị nke ịnụ ụtọ ezumike a na-eme ka ị kpebie ụdị njem ịchọrọ ịga..
Ihe kachasị ọnụ bụ ụgbọ elu
Naanị ihe dị oke ọnụ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-aga ebe ahụ, ụgwọ ụgbọ elu. Iji belata ya, ị nwere nhọrọ abụọ:
I nwere ike ichere n’oge ikpeazụ, nke pụtara na ị nwere mgbanwe ụbọchị ị ga-eso na-eme njem ma ị ga-abụrịrị mmadụ abụọ. Also na-atụ egwu na ụbọchị ezumike ga-abịarute na ị ga-apụkwa n'ụgbọ elu n'ihi na ihe niile adịlarị akwụkwọ.
Ma ọ bụ ị nwekwara ike ịtụ anya ịzụta tiketi dị ka o kwere mee, iji nweta onyinye kacha mma. Na nke ahụ pụtara obere mgbanwe na ịnwe ihe niile ezube ... ma ọ bụrụ na ihe atụghị anya, ọ ga-abụ na ị ga-atụfu ego ma ọ bụ akụkụ buru ibu n'ime ya, n'ihi na mgbe ị debere ọtụtụ oge tupu oge eruo, anaghị enwekarị ọtụtụ nkwa laghachi ma ọ bụrụ na ị wepụghị mkpuchi mkpuchi.
Mgbe ị nọ ebe njedebe gị
Ozugbo ala, ụgbọ njem ala anaghị enwe ahụ iru ala mana ọ dị ọnụ ala. Na obodo ụgbọ elu na-enye nnọọ ala udu.
Banyere ebe obibi, ma e wezụga oge dị elu ma ọ bụ ihe omume akọwapụtara, ọ ga-akacha mma ịgbazite ka ị rutere, jụọ ma tụnyere ọnụahịa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa n’ onlinentanet nwere ike inye onyinye dị asọmpi.
Nri abụghị naanị ọnụ ala, ọ dị oke mma ma dịkwa iche iche, ma dịkwa oke ọnụ.. N'ezie, ọ bụrụ na ị gbanwee maka nri mpaghara. Ọ bụrụ na ị na-eri na okomoko hotels, ọ ga-eri gị otu ihe ahụ dị ka ebe a ma ọ bụ karịa.
Na ọnọdụ ndị a, ọ kachasị mma ịhazi njem ogologo (site na izu 3 gaa n'ihu) iji nwee ike ịkwaga na-enweghị ọsọ ọsọ nke ga-eme ka njem dị oke ọnụ ma dezie ego na tiketi ahụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji zute otu ụmụ akwụkwọ ndị werela ụbọchị izu ike na Ha agagharịwo Asia ọtụtụ ọnwa na obere mmefu ego. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịhazi ya tupu oge eruo, ma nwee ọ everythingụ na ihe niile ebe ị họọrọ ga-enye gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Bali » Ebe kachasị dị ọnụ ala n'ụwa bụ Asia
Minneriya, safari kacha mma na Sri Lanka